၂၀၂၀၊ ၁၂.၁၂ ကမ္ဘာအကြီးဆုံးစျေးရောင်းပွဲတော်ကြီးဆိုတာဘာလဲ? - Shop
၂၀၂၀၊ ၁၂.၁၂ ကမ္ဘာအကြီးဆုံးစျေးရောင်းပွဲတော်ကြီးဆိုတာဘာလဲ?01471
၂၀၂၀ နို၀င်ဘာလတွင် Shopဟာ တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ အကြီးမားဆုံးနှင့်မယုံနိုင်လောက်အောင်ရောင်းအားအကောင်းဆုံးဖြစ်သည့် ၂၀၂၀၊ ၁၂.၁၂ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးစျေးရောင်းပွဲတော်ကြီး ကို ကျင်းပပြုလုပ်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းဒီစျေးရောင်းပွဲတော်ကြီးကို ကျင်းပလာခဲ့တာဆိုရင် ဒီနှစ်မှာတော့ သုံးကြိမ်မြောက်ကျင်းပပြုလုပ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
12 12 sale 2020 စျေးရောင်းပွဲတော်ကြီးဖြစ်ပေါ်လာပုံလေးကတော့ နိုဝင်ဘာလ ၁၁ရက်နေ့ဟာ တရုတ်နိုင်ငံ၏ Single dayအဖြစ်လူသိများကြပါတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်မှာအကြီးမားဆုံးစျေးရောင်းပွဲတော်လဲဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံ၏အကြီးမားဆုံး online shopping ကုမ္ပဏီကြီးဖြစ်တဲ့ Alibaba ဟာအွန်လိုင်းမှ အကြီးစားအွန်လိုင်းရောင်းချမှုကို ၁၁.၁၁ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးစျေးရောင်းပွဲတော်ကြီး ဖြင့် ကျင်းပပြုလုပ်ရန်ရည်ရွယ်ခဲ့ပါတယ်။ Shop.com.mm ကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှာ Alibaba မှ အပြီးတိုင်ဝယ်ယူခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ Shop MM မှာလဲ ၁၁.၁၁ စျေးရောင်းပွဲတော်ကြီးကိုစတင်ကျင်းပလာခဲ့ပါတယ်။
ဒီနှစ်မှာကျင်းပပြုလုပ်မယ့်‌ ၂၀၂၀၊ ၁၁.၁၁ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးစျေးရောင်းပွဲတော်ကြီး ကို နိုဝင်ဘာလ ၁ မှ ၁၀ ရက်အတွင်းကို အကြိုအနေနဲ့ ပါဝင်ဆင်နွှဲနိုင်မှာဖြစ်ပြီး နိုဝင်ဘာလ ၁၁ မှ ၁၇ ရက်နေ့တွေမှာတော့ အကြီးကျယ်အခမ်းနားဆုံး ၂၀၂၀၊ ၁၁.၁၁ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးစျေးရောင်းပွဲတော်ကြီး ကို shop.com.mm မှာကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ် ။
၂၀၂၀၊ ၁၁.၁၁ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးစျေးရောင်းပွဲတော်ကြီး ဟာ ဒီနှစ်မှာတော့ အရင်နှစ်တွေနဲ့မတူပဲ လျှော့စျေးအစီအစဉ်ပေါင်းများစွာပါဝင်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ‌ဒီ ၂၀၂၀၊ ၁၁.၁၁ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးစျေးရောင်းပွဲတော်ကြီး မှာဆိုရင်တော့ ကုန်စ္စည်းအမှတ်တံဆိပ်ပေါင်း ၅၀၀၀ကျော်မှ ကုန်ပစ္စည်းပေါင်း ၁၀၀၀၀၀ကျော်ကို အထူးလျှော့စျေးတွေနဲ့ရောင်းချပေးမှာပဲဖြစ်တဲ့အတွက် လိုချင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကို တစ်နေရာထဲမှာရနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍ သင်ဟာ လိုချင်တဲ့ပစ္စည်းတွေရှိတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ သင့်ရဲ့ အိမ်ကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ စားသောက်ကုန်တွေဝယ်စုထားချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် ၂၀၂၀၊ ၁၁.၁၁ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးစျေးရောင်းပွဲတော်ကြီး ဟာ သင့်အတွက် ဝယ်ယူဖို့ အသင့်တော်ဆုံးပွဲတော်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ဒီ ၂၀၂၀၊ ၁၁.၁၁ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးစျေးရောင်းပွဲတော်ကြီး ဟာ တစ်နှစ်မှာတစ်ခါသာ ကျင်းပတာဖြစ်တဲ့အတွက် လက်မလွှတ်သင့်တဲ့ပွဲတော်ကြီးပါပဲ။
၂၀၂၀၊ ၁၁.၁၁ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးစျေးရောင်းပွဲတော်ကြီး မှာပါဝင်ဖို့အတွက် Shop Appကို Download ပြုလုပ်၍ Register လုပ်ထားဖို့တော့လိုအပ်ပါ လိမ့်မယ်။
Previous ArticleWhat is 12.12 The World’s Biggest Sale 2020?Next Article၂၀၂၀၊ ၁၂.၁၂ ကမ္ဘာအကြီးမားဆုံးစျေးရောင်းပွဲတော်အတွက် လျှော့စျေးကူပွန်တွေကိုရယူဖို့အတွက် ဘယ်နည်းလမ်းတွေကအလွယ်ကူဆုံးဖြစ်မလဲ?